लेख Archives - Pardeshi Khabar
सन्देश मुलक कथा कछुवा ( मङोलियन ) र खरायो ( आर्यन ) को आधुनिक कथा।
हामी सबैले बच्चैमा पढेको र थाहा पाएको कथा हो। ” खरायो र कछुवाको ” , आज म यसै कथाबाट सुरु गर्छु । एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुग्ने खरायो र कछुवाको दौड प्रतियोगितामा खरायोको अहम्ताले उ हारेको थियो। र , खरायो इतिहासमा बदनाम भो । त्यस पछिको बाकी कथा अब पढ्नुस , खरायोलाई यो हारले सारै हिनताबोध भैरह्यो। उसको यहि घमण्डको कारणले पाएको हारले उसको पुरै कुललाई नै बेइज्जतीको तक्मा भिरायो। यहीँ पिडाकै कारण उसले एकदिन कछुवा सङ फेरी दौड गर्ने र आफ्नो गल्ती नदोहोर्‍याउने ( दौडको बिचमा नसुत्नेफुर्सदमा
लेख, साहित्य पर्देशी खबरमा ताजा खबर, फोटो ग्यालरी, बिशेष समाचार, विचार विश्लेषण, साहित्य बाटिका No Comments »
एउटै देशका नागरिक माथि अलग अलग ब्यबहार किन ?
Post by: user प्रकाशीत मिति: November 16, 2016
सन्दर्भ नेताहरुका उपचारको लागि भनेर सरकारले लाखौं करोडौं रुपैया उपलब्ध गराउदै आएको बारेमा l नैनकला राई/ कुवेत l हो जन्मे देखि मृत्यु नभएसम्म हामीलाई विभिन्न समस्याहरुले पछ्याइरहन्छन् l केहि समस्याहरु आफैले गर्दा आइपर्छन भने केहि समस्या इस्वरको वर्दानै स्वरूप लिन बाध्य हुन्छौं जुन नचाहेर पनि अपनाउनै पर्ने हुन्छ यसको नाम हो “रोग” l जिउने रहर कसलाई हुदैन र ? तर पनि यिनै रोगका कारण दैनिक लाखौं ब्याक्तिहरुका सुनौला सपनाहरु बिचैमा पूर्ण बिराम लागिदिन्छ l जसमा धेरै भन्दा धेरै समस्या खेपिरहेका दर्दनाक कहानीहरु गरिबिका रेखा मुनि रहेकाहरुकैमा देख्न र सुन्नमा आइरहेका छन्फुर्सदमा
लेख, विचार/विश्लेषण Uncategorized, ताजा खबर, परदेशी समाचार, मनोरंजन, विचार विश्लेषण No Comments »
दोहामा जमेको "सिसा गजल"
फोटोले साथीहरू झुक्किए झन् झुक्काउन निहुँ मिल्यो। कारण कतारमा कलम चलाउने हामी सबै फनी। छ जना साथीहरूको नाम चुनियो पाँपाँच गजल वाचन गर्ने भए। हामी सबै कस्सियौँ प्रचार लप्रसार र कार्यक्रम व्यवस्पानमा। तोकिएको दिन अर्थात सेप्टेम्बर ९, बिहानको काम छ र काम बाहिर गर्मी र पसिना। साथीहरू भेट्दा अमिलोअमिलो पसिना गन्हाए के गर्ने भो जान्न! मन कठोर बनाएर लाजसरमबाट बच्न । जाने दिन आज बिहान चार बजे उठेर तयारी गरें। काममा जाने र उतैबाट दोहामा नवोदित र अनेसासको मासिक वाचन तथा १५१ औँ मोति जयन्ती समारोहमा जाने एकल निर्णय भो।फुर्सदमा
रूप रसाईली, लेख, साहित्य Uncategorized, कला, ताजा खबर, नेपाली खबर, परदेशी समाचार, फोटो ग्यालरी, विचार विश्लेषण, साहित्य बाटिका No Comments »
अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस
Post by: user प्रकाशीत मिति: May 1, 2016
नैनकला राई,कुवेत, मे १ – आज मे १ तारिक नेपाल लगाएत संसारभरी १२७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम भन्ने नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर यो दिवस प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको मे १ का दिन मनाउने गरिन्छ । विश्वका मजदुरले यस दिवसलाई पर्वका रुपमा लिँदै आफ्ना हकअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालको सन्दर्भमा भने २००३ सालमा रघुपति जुट मिलमा पहिलो पटक मजदुर आन्दोलनफुर्सदमा
लेख Uncategorized, ताजा खबर, परदेशी समाचार, बिशेष समाचार, मनोरंजन, विचार विश्लेषण No Comments »